Dizayina Igumbi Lokugeza Ekhaya Ukuze Lihle Futhi Ube Nesimo Esihle Esikhathini Sokugeza Zonke Izinsuku
Ikhaya / Blog / Dizayina Igumbi Lokugeza Ekhaya Ukuze Lihle Futhi Ube Nesimo Esihle Esikhathini Sokugeza Zonke Izinsuku
2021 / 01 / 11 UkwahlukanisaBlog 7955 0
Isikole Sebhizinisi Langasese 2020-11-23
Indlu yangasese njengendawo esetshenziswa njalo ukusetshenziswa nsuku zonke. Kuklamo, uma ungenzi ukubukeka okuhle, isikhathi, uzozizwa ungakhululekile neze. Ngakho-ke ungayinikeza kanjani indlu yangasese ukuze ibe yinhle ngokwengeziwe? Ngabelana ngamacala wokuklanywa kwendlu yokugezela anenani eliphakeme kuwe namuhla, ngiyethemba ungaba nemizwa enhle njalo lapho ugeza nsuku zonke.
Idizayini yethoni eyimpunga ithandwa kakhulu eminyakeni yamuva. Igumbi lokugezela ekhaya manje selingagandaywa ngamathayili we-matte ithoni empunga, anempahla emhlophe namnyama ethambile nempahla yokuhlanzeka, ibukeka isencane futhi iphana.
Ungafaka futhi izinkuni, upinki, njll esikhaleni esimpunga njenge-toner ukugwema uhlelo olujwayelekile lwempunga lubukeka lufiphele kakhulu eminye imininingwane iyenza umsebenzi omuhle ingenza indlu yokugezela ibe yinhle kakhulu.
Inhlanganisela yomklamo omnyama nomhlophe ilungele kakhulu isitayela sesimanje, isitayela esincane, kanye nomhlabathi ovula ithayili elinamacala ayisithupha ukukhulisa umuzwa wokubuka wesikhala endlini yokugezela, ukuze indlu yokugezela ibukeke ivulekile kakhulu.
Amathayili emabula ayizinketho zabaninikhaya abaningi, futhi amathayela emabula nawo eza ngamaphethini ahlukahlukene nemithunzi, okunganqunywa ngokuya ngokuthanda kwakho. Izakhi zensimbi zingabuye zengezwe ukwenza indlu yokugezela ibukeke njengasemkhathini.
Amanye amathayili wokudala agandayiwe angenza indawo yokugezela ibukeke ithakazelisa, kepha futhi nokugwema ukubukeka kuminyene kakhulu, ukukhetha ithoni kubaluleke kakhulu.
Faka amathayili ezimnandi ezimibalabala njengama-accents endlini yokugezela elula futhi enomusa Ukubeka indawo yokugeza kanye naphansi ngamathayili ezimbali anethoni eluhlaza okwesibhakabhaka kwenza indlu yangasese ibukeke ifana nemibhalo.
Indlu yangasese ejwayelekile ekhaya ingakhetha ukwenza usinki ngaphandle komnyango wendlu yangasese, ukuze kube lula ukusetshenziswa nsuku zonke. Futhi usinki ngokuzimela uphume endlini yangasese, kodwa futhi udlala nomphumela wokuhlobisa.
Indawo yokugezela yanele, manje usungakwazi ukuklama ezintathu ezihlukene. Hlukanisa indawo yangasese, usinki kanye nendawo yokugeza, bese ufaka ukwahlukanisa okuhle ukwenza indlu yokugezela ibukeke ihle kakhulu.
Ngemuva kokubheka lawa macala wokuklama izindlu zangasese, ingabe kufanele uthole eyodwa oyithandayo? Ngicabanga ukuthi ukwakheka kwendlu yokugezela kunganqunywa ngokuya ngesitayela sekhaya, isibonelo, ithoni empunga yendlu yangasese ilungele kakhulu isitayela esincane nesaseScandinavia. Umklamo wendlela egandaywe ngemabula ulungele isitayela sanamuhla nesaseYurophu. Landela isitayela ngeke kwenze indlu yangasese ibukeke ishaqeka kakhulu.
Edlule :: Ungakwenza Kanjani Uma Umbukiso Uvinjelwe Futhi? Ungasheshi! Yisebenzise Ukucwilisa… Isimangaliso! Shesha Ukutshela Amakhasimende Akho! Olandelayo: Ubusika Bulapha! Ingabe Kufanele Ngithenge I-Shower Thermostatic? Lalela Ochwepheshe, Akumangalisi Abantu Abaningi Kangaka Bafuna Ukushintsha !!!